Ny tombontsoa azo avy amin'ny fitsapana ny tapakila sy fihenam-bidy | Martech Zone
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fitsapana ny tapakila sy fihenam-bidy
Alahady, Novambra 29, 2015 Alatsinainy, Novambra 30, 2015 Douglas Karr
Mandoa premium ve ianao raha te hanana fitarihana vaovao, na manolotra fihenam-bidy hanintonana azy ireo? Ny orinasa sasany dia tsy hikasika ny tapakila na fihenam-bidy satria matahotra ny hanambany ny marika izy ireo. Ny orinasa hafa dia nanjary miankina amin'izy ireo, mampihena ny tombom-barotra. Tsy misy fisalasalana kely na miasa na tsia izy ireo. 59% amin'ireo mpivarotra dizitaly no nilaza fa ny fihenam-bidy sy ny bundles dia mahomby amin'ny fahazoana mpanjifa vaovao.
Na dia miavaka aza ny fihenam-bidy amin'ny familiana tombony amin'ny fotoana fohy, dia afaka manimba hatrany amin'ny farany ambany izy ireo, ary mampiofana ny mpanjifa tsy hividy amin'ny vidiny feno. Tsy midika akory izany hoe tsy tokony hihena mihitsy ireo marika - mpivarotra be pitsiny izao dia mifantoka amin'ny fametrahana fihenam-bidy amin'ny fomba stratejia vs. amin'ny fitondrana azy ireo ho toy ny milina fanovana iray. Jason Grunberg, Sailthru
Ny lakilen'ny famoahana tapakila sy fihenam-bidy dia ny fitsapana azy ireo. 53% amin'ireo mpivarotra dizitaly no manao andrana A / B na fanandramana marobe. Diniho ny tahan'ny fiovam-po, ny fantsona ampiasaina, ny fahita matetika amin'ny fividianana, ny salan'isa momba ny lamandy ary ny sandan'ny andavanandron'ny mpanjifa izay azo tamin'ny alàlan'ny tapakila sy fihenam-bidy
Nozarainay ny zava-drehetra mila mahalala momba ny tapakila ny mpivarotra ary paikady fihenam-bidy amin'ny infographic taloha. Na izany aza, tonga amin'ny fanovana ny sandany, ny famonosana ary ny faharetan'ny fihenam-bidy izany rehetra izany mandra-pahitanao fitambarana mety izay manintona sy mitazona ny mpanjifa nefa tsy manapotika ny banky!
Tags: salan'isa momba ny filaharanafantsonapaikady coupontapakilapaikady fihenam-bidyfihenam-bidy amin'ny vanim-potoana niomerikasandan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainanylanja mandritra ny androm-piainanasailthrufitiliana
5 Mampiato ny data sy ny vinavinan'ny mpivarotra ratsy
Fomba 11 hampitomboana ny ROI amin'ny varotra atiny